Lova: ahoana no hampisaraka ny maty ny fananany rehefa tsy misy ao amin'ny testamenta
Lova: ahoana no hampisaraka ny maty ny fananany rehefa tsy misy ao amin’ny testamenta
Izany matetika no mitranga fa ireo izay maty efa tsy nanao ny sitrapony. Amin’ny toe-javatra ireo, ny lalàna no mametraka ny fitsipika ho an’ny nampisaraka ny fananany ny maty teo anivon ny havany sisa velona. Ny toetrany ihany koa no nisaraka vady raha toa ka ny farany dia tsy ho diso any, ny fisarahana, eo amin’ny fitsarana ny fisarahana. Izany dia mazava ho azy fa tsy mihatra amin’ny raharaha iray nisara-bady vady. — Raha miaraka amin’ny vady, velona ny ankizy (tsy ara-dalàna, ara-boajanahary, na nolaniana), dia ilaina ny manavaka ny:) raha ny zaza dia iray ihany: ny antsasaky ny fananany ny maty mandalo ny vady ary ny antsasany ho any ny zanak) raha toa ka ny ankizy mihoatra ny iray: ny iray amin’ireo telo ny toetrany mandalo ny vady sy ny sisa roa na telo no ho zaraina amin’ny faritra mitovy eo anivon ny zanak. — Raha toa ka tsy misy tafavoaka velona ny vady ary tsy misy afa-tsy ny iray na mihoatra amin’ny lahy, ny toetrany mandalo manontolo ny zanany lahy tokana, na, amin’ny faritra mitovy, ny ankizy rehetra. Koa ny amin’ity tranga ity, na inona na inona mandalo ny rahalahy, rahavavy na ny hafa ny havana. — Raha toa ka tsy misy zanaka, fa hafa ny taranany (e.g. zafikeliny, izany hoe zanaky ny ankizy), ny manontolo ny toetrany mandalo amin’ny mizara mitovy, ho any amin’ny farany. — Raha ny maty ho velona, ny vady sy ny rahalahy na anabavy avy amin’ny ara-dalàna (na ny taranak) na ray aman-dreny, ary mandritra izany fotoana izany, tsy misy zanany (na ny ankizy no tsy ho tafavoaka velona), na ireo taranaka hafa (toy ny zafikeliny): roa telo ny lova mandeha ny vady sy ny iray amin’ireo telo ireo rahalahy, rahavavy na anabavy ary ray aman-dreny. — Raha ny maty ravina tsy misy vady, na zanaka, na ireo taranaka hafa, na rahalahy sy anabavy, na ray aman-dreny, fa ny raviny hafa ascendants (e.g. raibe sy renibe), ny fananany ho any ny antsasaky ny ascendants ny avy amin’ny rainy-dalana ary, ho ny antsasany, ny ascendants ny reny tsipika. Izany raha toa ny ascendants mitovy ny mari-pahaizana (ohatra, raha misy roa dadabe, ny iray avy amin’ny rainy ary ny iray reny). Raha toa, kosa, ny razambeny dia ny hafa mari-pahaizana (ny raibeko sy ny renibeko), izany ihany no handova ny ascendant, ny manaraka avo indrindra (amin’ity tranga ity, ny raibe). — Raha ny maty ravina ihany ny havany avy ny fahatelo dia ny kilasy fahenina, misy afa-tsy ireo akaiky kokoa (ny voalohany dadatoa, dia zanaky ny mpiray tampo, lehibe-nenitoa sy dadatoa, sns) amin’ny mizara mitovy. Ohatra, ny fisian’ny dadatoa (heverina ho ny havany ny fahatelo mari-pahaizana) navahan’i avy amin’ny lovan ny zanaky ny mpiray tampo heverina ho toy ny fianakaviany ny fahefatra mari-pahaizana). Raha toa ka tsy misy dadatoa, afa-tsy telo zanaky ny mpiray tampo sy ny lehibe roa-nenitoa sy dadatoa, ny fananana rehetra dia mizara amin’ny faritra mitovy eo amin’ny zanaky ny mpiray tampo. Rehefa misy lahy na ny rahalahy ny anabaviny, izay mety ho mitondra ny lohateny hoe ny lova na iray mizara ny toetrany, renounces na maty talohan ‘ny maty, ny anjara mizara eo anivon’ ny taranany. Ohatra, raha ny maty ravina roa lahy, Lehilahy sy Caio (isaky ny ho saran’ny ny dimam-polo), ary Caio hiala ny tany lovany (na ho faty eo anatrehan’ny ray aman-dreny), ny anjara Caius no ho zaraina anivon ‘ny zanak’ Caius mitovy (ny tsirairay avy izay ho avy eo ny dimy amby roa-polo ny lova ny fitambaran’ny). — ny severance mandoa, fa dia ny vady, ny zanaka ary ny misy havana ao amin’ny fahatelo mari-pahaizana fa voampanga ny maty ary misy ny havana ny ny vady ao amin’ny ambaratonga faharoa, dia foana teo ny amin’izay ho lany ny maty — ny azo atao tsara ny onitra noho ny fahavoazana eo amin’ny tranga izay ny fahafatesana niseho ho nomena andraikitra avy amin’ny tompon’andraikitra hafa (ohatra: ny lozam-pifamoivoizana). Raha ny roa mpivady buy sombin-tany (amin ny tany dia nisoratra anarana ho azy) izy ireo ary manan-janaka enina sy ny vadiny no tsy hita, izy remarries sy ny vady faharoa dia enina hafa ny ankizy, mandritra ny fotoana fa tsy hita izay mba handova sy hatraiza. Tsara ny hariva, dia mangataka ny vaovao: dia nandova avy amin’ny mpiray tam-po ny ny maty izay tsy nanana na ray, na reny, na rahalahy sy anabavy, hany havany ny mari-pahaizana voalohany, taorian’ny taona maro (efa maty tamin’ny taona) nanana trano sy ny vola niditra tamin’ny tsara liana-mitondra paositra fa, amin’ny fotoana, ricapitalizzati. Farany tamin’ny volana septambra teo c ny mpisolovava sy ny notary efa nizara ny vola, ny trano no efa nivarotra sy izay nividy dia zaraina mivantana ny vola amin’ny tsy miankina soratra voaomana ny mpisolovava. Ny mpandova, dia roa ambin’ny folo havanay izaho sy izay rehetra eo amin’ny fiainana, fa ireo izay maty nandova ny ankizy, mizara ny ampahany ny ray aman-dreny (ka nilaza ny mpahay lalàna), dia nankany amin’ny notary no ho famantarana ny herin ‘ny mpisolovava’ ny telo-polo-voalohany volana aogositra, ny f, fa indrindra ny mpandova mivantana tany amin’ny tanàna samihafa any Italia. Ny mpisolovava izay misolo tena ahy, ho ahy sy ny hafa, dia naniraka ny vola amin’ny alalan’ny banky, tsy misy tahirin-kevitra, ny tena renivohitra, ohatrinona ny saram ny mpisolovava sy ny notary. Dia niantso an-tariby mba hahazo vaovao mikasika ny tahirin-kevitra toy izany ny zava-nitranga nandritra ny fanafihana, dia tsapako aho nalaina aback, ary tsapako fa sosotra ny fangatahana, na dia nieritreritra izy fa tsy ampy, ny haka ny vola ary dia ho faly aho. nampanantenaina, na izany aza, fa dia alefaso. Isika tamin’ny novambra, dia mbola tsy nahazo. Io vola io fa efa nahazo azy ireo aho mba hilaza aho rehefa manao ny. ary tsy misy tahirin-kevitra, tahaka ny ataoko. raha ny mpahay lalàna tsy naniraka ahy ny ilaina. Misaotra anao raha manome ahy ny valin-tsara ny andro, izaho mba te-hanontany fotsiny ny fanontaniana, dia tsy hita ny renibeny, izay manana ny zanany vavy roa, ny iray amin’izy ireo dia ny nenitoako izay efa niaina foana miaraka aminy ao an-trano mandra-fahafatesana, ny hafa indray dia ny reniko ary manana fianakaviana, dia ara-drariny dia tafasaraka tanteraka amin’ny trano izay izy no teraka. ny fanontaniana dia hoe: ny zanakavavy dia tokony mitovy ny zo ho fantatrareo rehetra sy ny hetsika ny fisotroan-dronono ny reniny, na afa-tsy ny vavy izay nipetraka niaraka taminy. misaotra anao manomboka izao raha toa ka ianao no nanome ahy ny valiny Tsara ny Mpisolo vava aho dia te hanontany anareo ny vaovao momba ny lafin-javatra hafa ny nenitoako vao haingana, tsy ampy. Dia mpitondratena tsy misy zanany, zafikeliny no folo, telo ny rahavavy iray, ary fito avy ny rahavavy iray hafa, efa nodimandry. Ankehitriny, ny fananana dia nozaraina ny misy ny zafikeliny ao mitovy, na, ary izany no toa tsy marina izany, ny dimam-polo ho an ‘ny zanak’ anabavy, sy ny dimam-polo ho an ‘ny zanak’ ilay rahavavy iray hafa. Misaotra anareo aho, niandry ny valin. Miarahaba, Andriamatoa Grika.
Ny ray dia manana rahavavy izay, kosa, dia nanao ny fanambadiana ny sig. x handeha ho velona ao ny fananana ny raiko rahavavy (nenitoa), ny farany, efa ny ray ny zazavavy kely iray. maty ny rainy, ny nenitoany sy ny vadiny, izay lasa mpandova ny tompon’ny fananana. misaotra Raha misy olona izay maty efa telo mirahalahy (ny maty voalohany) ary avy eo dia ny zana-drahalahiny (zanaky ny rahalahy), ahoana no hizarana ny tany lovany. Tiako ihany koa ny ara-pitsipika momba.
noho ny tsara hariva
raha tsy mbola maty ny iray amin’ireo roa vady, tsy zanaka, dia afaka mizara ny lova. na dia tsy maintsy miandry izay ho nanjavona ny zavatra hafa ihany koa, aho, dia nanankina ny nenitoako ary ankehitriny dia tsy misy intsony ny maty ary tsy mba ny sisa mpandova toy ny ankizy afa-tsy ny vadiny ary ny rahalahiny roa maty ankehitriny, ary koa ny rainy sy namela lova aho, na ny dadatoany izay, ny vadiko dia manana ny zo sasantsasany hizara ny ray ny mpiara-miasa maty namela an-tsitrapo na inona na inona ny rahalahiko (isika roa) ao amin’ny birao ara-dalàna toy izany dia noho. Ny antsasaky ny manontolo na ny hizara ny ara-dalàna. Aho manambady, mipetraka miaraka amin’ny vadiko ao an-trano ny reniny, dia tsy manana toetra mampiavaka lohan’ny taratasin’ny, fa handova ny amin’ny anabaviny, rehefa maty ny reniny, ny reny dia mbola velona. Aho dia te-hahafantatra raha toa ka ao ny raharaha ny fahafatesan ny vadiny, ny zanany lahy ary izaho dia manana zavatra avy amin’ny lova navelan’ny reniny, na afa-tsy ny anabavy ny. misaotra miarahaba, izaho no eo amin’ny toe-javatra mitovy amin’izany amin’ny maha samy hafa fa ny vadiko efa maty aho, dia misaraka saingy tsy nisara-panambadiana ary manana zazavavy zaza tsy fantatro raha ianao, dia afaka mampahafantatra anao tsara raha toa ianao aoka aho hahafantatra misaotra anao Noho ireo izay efa lova, ary avy eo maty, izay no mitranga fa lovany
Ny sampan-draharaha ny fomba amam-panao sy ny Monopolies - paositra Consignments